I-tvOS 12.0.1 isiyatholakala kubo bonke abasebenzisi | Ngivela kwa-mac
I-tvOS 12.0.1 isiyatholakala kubo bonke abasebenzisi
Futhi kubonakala sengathi isibuyekezo esethulwe izolo kubasebenzisi be-Apple bekungeyona yodwa ntambama. Kuyiqiniso ukuthi besigxile ekwethulweni kweMacOS Mojave nakuzo zonke izindaba kulethwa yi-OS entsha ku-Mac, kodwa ngasikhathi sinye inguqulo esemthethweni ye-tvOS, inguqulo 12.0.1.
Kungukuvuselelwa okuncane kepha okudingekayo ukuthi noma ikuphi kufakwe. Kubukeka sengathi inguqulo 12 ye-tvOS ibinenkinga ethile noma isiphazamisi esenze ukuthi kwethulwe le nguqulo entsha. Ngakho-ke bonke labo abane- Isizukulwane sesine i-Apple TV noma kamuva ungaqala ukubuyekeza ngokushesha okukhulu.
Okusha kunguqulo yangaphambilini ye-tvOS kugxile ngqo ekuthuthukisweni kokuqina, ukuphepha nokwethembeka kohlelo, ngaphezu kokungezwa kokusekelwa komsindo weDolby Atmos kanye nezithombe ezibukekayo zephephadonga. Kulungile kubonakala sengathi inguqulo ibinenkinga yingakho i-Apple kuye kwadingeka yethule isibuyekezo kungakapheli isonto sikhishwe ngokusemthethweni.
Kulabo abanezibuyekezo ezizenzakalelayo, akudingeki ukuthi benze noma yiziphi izinyathelo, kepha abasebenzisi abanezibuyekezo ngesandla kumele bafinyelele izilungiselelo zokufakwa kwabo. Uhlobo olusha selivele lukhona kusukela izolo ntambama ngakho-ke isincomo yilokho ifake ngokushesha okukhulu ku-Apple TV yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » Apple TV » I-tvOS 12.0.1 isiyatholakala kubo bonke abasebenzisi
Sesivele sinokuwohloka kwe-Apple Watch Series 4 esandleni se-iFixit
Ungayifaka kanjani iMacOS Mojave ku-Mac "engasekelwa"